Mogadishu Journal » Mino Riola oo 200-M dul dhigay Madaxa xidigan ay wada doonayaan Chelsea Iyo Liverpool
Sida ay sheegayaan wararka imaanaya talyaaniga wakiilka xidiga weerarka kaga ciyaara Napoli ee Lorezo Insigne ayaa niyad jabiyay kooxaha xiisaynaya xidigan.
Insigne ayaa xiisa ka helayay kooxo waa wayn oo reer yurub ah kuwaas oo ay ugu horreeyaan Chelsea iyo Liverpool.
Yeelkeede, Corriere dello Sport ayaa baahisay in Mino Riola uu heshiis afka ah kula gaaray madax waynaha Napoli in Insigne laga iibin doono kooxdii miiska saarta adduun dhan 200-malyan oo Euro una dhiganta 178-malyan oo gani.
Taas ayaana kadhigan in Blues iyo Reds ay candhuuftooda ay dib ugu liqi doonaan haddi aysan iska bixin lacagtan.
Blues ayaana si aad ah ugu baahan xidig sida Insigne oo kale ah kaas oo si joogta uga soo weerar gali kara garbaha.
Dhanka kale Reds ayaan isku dhibi doonin lacagta xidigan oo aad u fara badan maadaama ay haystaan kuwa si aad ah garbaha ugu wanaagsan sida Mo Salah, Sadio Mane iyo Xherdan Shaqiri.